नेयमरका कसरी पुगे बार्सिलोना ? नेयमरका उतारचढावहरु « Karobar Aja
नेयमरका कसरी पुगे बार्सिलोना ? नेयमरका उतारचढावहरु
दस्तावेज ,श्रावण २१,शनिबार,२०७४ नेयमरको अपेक्षित विश्व स्थानान्तरण शुक्रबार पूरा भएको छ, बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) मा । यसले बार्सिलोनामा बिताएको चारवर्षे उनको यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । बार्सिलोना जर्सीमा उनको खेल जीवनले सामना गरेका उतारचढाव यस्ता छन् ,
तीन स्टारको चमत्कार
नेयमर, लियोनल मेसी र लुइस स्वारेजले सँगै बिताएको पहिलो सिजन खुबै सफल रह्यो । उनीहरूलाई रोक्ने कोही देखिएनन् । सन् २०१४–१५ को सिजन उनीहरूले तीन उपाधि जिते– ला लिगा, च्याम्पियन्स लिग र कोपा डे रे । त्यस सिजन नेयमर आफैंले राम्रो खेले, पीएसजी र बायर्न म्युनिखविरुद्ध ३–३ गोल गरे । युभेन्ट्सविरुद्धको फाइनलमा पनि उनले गोल गरे । त्यससँगै उनी रहे, मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बराबरीमा धेरै गोल गर्ने ।
मेसी छैन, समस्या छैन
नेयमरले बार्सिलोना छाड्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ, मेसीको छायाँबाट पर जाने । उनी चाहन्छन्, मेसी र रोनाल्डोको दबदबा रहेको बालोन डे’अर जित्ने । मेसीसँगै खेल्दा नेयमरको खेल पनि उत्तिकै स्तरीय देखिन्छ । सन् २०१५ तिर एकपल्ट मेसी घाइते हुँदा नेयमरको खेल अझ स्तरीय देखियो । मेसीबिना ९ खेलमा नेयमर र स्वारेज मिलेर ११ गोल गरे । त्यसै क्रममा त हो, बार्सिलोनाले सान्टियागो बेर्नाबेउमै रियल म्याड्रिडलाई ४–० ले हराएको ।
च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो पुनरागमन मानिन्छ, बार्सिलोनाले पीएसजीविरुद्ध रचेको । पहिलो लेगमा ४–० ले जितेर पनि पीएसजी दोस्रो लेगमा ६–१ ले पराजित रह्यो । त्यो खेल नेयमरको वरिपरि घुमेको थियो । फ्री–किक र पेनाल्टीबाट उनले उत्कृष्ट गोल मात्र गरेनन्, सर्जियो रोबर्टोको निर्णायक गोलका लागि पास पनि उपलब्ध गराए । बार्सिलोनाले अन्तिम ७ मिनेटमा तीन गोल गरेको थियो । अहिले सायद पीएसजीले त्यसैको बदला लिएको छ, नेयमरलाई अनुबन्ध गरेर ।
सन् २०१३ मा नेयमर बार्सिलोना आएका थिए । तर उनको जुन स्थानान्तरण रह्यो, त्यो विवादास्पद रह्यो । त्यसविरुद्ध स्पेनमै दुई अदालती प्रक्रिया चल्यो । बार्सिलोनाले पहिलो मुद्दालाई त पार लगाएको छ । अर्को मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ । सन् २०१६ मा नेयमर आफैं अदालतमा उपस्थित रहन बाध्य रहे । मुद्दा अगाडि बढ्ने क्रममा नेयमरलाई फेरि अदालतमा उपस्थिति हुनुपर्नेछ, यदि उनको आवश्यकता पर्छ भने ।
पूरा नाम : नेयमर डा सिल्भा सान्तोस जुनियर
जन्ममिति : सन् १९९२ फेब्रुअरी ५ (२५ वर्ष)
जन्मस्थान : मोगी डास क्रेजेस, ब्राजिल
उचाइ : १.७५ मिटर (५ फिट ९ इन्च)
भूमिका : लेफ्ट विङ/फरवार्ड
सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू : अमेरिकाविरुद्ध अगस्ट १०, सन् २०१०
अन्तर्राष्ट्रिय क्याप : ७७
अन्तर्राष्ट्रिय गोल : ५२
क्लब : सान्तोस (ब्राजिल, २००९–१३), बार्सिलोना (स्पेन, २०१३–१७), पीएसजी (फ्रान्स, २०१७ यता)
प्रमुख उपाधि : च्याम्पियन्स लिग २०१५, ला लिगा २०१५ र २०१६, कोपा डे रे, २०१५, २०१६ र २०१७, क्लब वल्र्ड कप २०१५, कोपा लिबर्टाडोरेस २०११, काम्पियनाटो पाउलिस्टा, २०१०, २०११ र २०१२, कोपा डो ब्राजिल २०१०
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि : ओलम्पिक स्वर्ण २०१६, कन्फेडेरेसन्स कप २०१३
नेयमर (ब्राजिल) : १९ करोड ७४ लाख पाउन्ड, बार्सिलोनाबाट पीएसजी, सन् २०१७
पाउल पोग्बा (फ्रान्स) : ८ करोड ९० लाख पाउन्ड, युभेन्ट्सबाट म्यानचेस्टर युनाइटेड, सन् २०१६
गारेथ बेल (वेल्स) : ८ करोड ६० लाख पाउन्ड, टोटेनहमबाट रियल म्याड्रिड सन् २०१३
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पोर्चुगल) : ८ करोड पाउन्ड, म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल म्याड्रिड, सन् २००९
गोन्जालो हिगुइन (अर्जेन्टिना) : ७ करोड ५३ लाख पाउन्ड, नेपोलीबाट युभेन्ट्स, सन् २०१६
लुइस स्वारेज (उरुग्वे) : ७ करोड ५० लाख पाउन्ड, लिभरपुलबाट बार्सिलोना, सन् २०१४
रोमेलु लुकाकु (बेल्जियम) : ७ करोड ५० लाख पाउन्ड, एभरटनबाट म्यानचेस्टर युनाइटेड, सन् २०१७